Macluumaadka Shirkadda Shuruudaha Adeegga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Nala soo xiriir
91 luqadood oo la heli karo.Goobta ugu horeysa ee shaqooyinka luqada adduunka ah.
Waxaad kuugu soo diri kartaa dalab shaqo ah oo badan oo 5 daqiiqo ah. Waa goob boosteejo ah oo u oggolaanaysa shaqo raadiyayaasha dunida oo dhan inay helaan shaqooyinkooda ugu fiican ee caqabadaha luuqadda ah.
(Waxaa laga helaa boosteejooyinka shaqada ee guriga.)
Waxa aad u diri kartaa bandhigyada shaqo bilaash ah.
Bixinta shaqooyinka dambe
Waxaad ku heli kartaa shaqo raadiyeeyaal adduunka ah.
Aqoonsiga hababka wax ku oolka ah ee shaqo raadiyeyaasha adduunka oo idil.
91 luqadood oo la heli karo
Waxaad tarjumi kartaa boosteejada shaqada ee laguugu sameeyay afkaaga hooyo adigoo u dhigma 91 luqadood.
SEO-ka luqadaha badan
Boostada la turjumay waxaa lagu farsameeyaa raadinta internetka ee luuqad kasta.
Ogeysiin si toos ah oo loogu talagalay raadinta makiinadaha
Wuxuu ogeysiiyaa makiinadaha raadinta ee qoraallada cusub ee shaqada iyadoo la isticmaalayo API.
Waxaa loo heli karaa qalab kala duwan oo ay ku jiraan PC iyo smartphone.
Mashiinka Raadinta badan ee Afafka ah
Mashruuca shaqo raadinta caalamiga ah ee 91 luqadood
Dhamaan warqadaha shaqada waxay ku muuqdaan makiinada raadinta luqadaha kala duwan oo ay bixiso Hopper.
Waxaad ku heli kartaa boostadaada shaqo ee malaayiin qof oo shaqo doon ah oo ku qoran luuqadooda hooyo, iyagoo isticmaalaya raadin badan oo muhiim ah.
* Ka sokow jariidada search engine ee Japan, waxaan qorshaynaynaa in aan siinno makiinadaha raadinta ee dalalka iyo gobollada kala duwan waqti ka waqti. - Coming Soon -
Hopper wuxuu Google ka caawiyaa shaqada
Boostadaada shaqo ayaa muuqata Google.
Maadaama Hopper loo qorsheeyay iyada oo ku saleysan xogta qaabaysan ee Google ee loogu talogalay Shaqooyinka, waa mid aad ugu caansan Google.
Qoraalada shaqada ee Hopper waxaa si toos ah loogu dhajiyaa Google.
Waxaad abuuri kartaa / maareyn kartaa boosteejooyinka shaqooyinka badan leh.
Si sahlan loo abuuro / maareyn karo shaqooyinka luqadaha badan.
Hal tallaabo oo loo turjumo
Keliya dooro luuqad, waxaadna si deg-deg ah u turjumi kartaa oo u daabaceysaa boostada shaqada.
(Lama oggola tirada luuqadaha turjumidda.)
Si toos ah u turjun
Haddii aad beddesho shaqo ku dhajinta luqadaada hooyo, waxaad si toos ah uga tarjumaysaa waxyaabaha ku qoran luqadaha kale.
Waxyaalaha saxda ah ee adiga kuu gaar ah
Haddii aadan jeclayn waxyaabaha si toos ah loo tarjumay, waxaad ku saxi kartaa adiga keligaa.
Maaraynta midaysan ee dhammaan codsadayaasha ku qoran afka hooyo.
Codsadayaashu waxay ku qoran yihiin liistada shaqo kasta. Waxaad maareyn kartaa dhammaan codsadayaasha si fudud.
Waxaad ka fiirin kartaa qofka codsadaha ku qoran afkaaga hooyo.
Waxaad fiirin kartaa taariikhda waxbarasho ee dadka codsadey iyo taariikhda shaqo ee ku saabsan amarka taariikheed.
Nidaam fariin badan leh
Is-dhexgelinta codsadayaasha afkaaga hooyo.
Looma baahna in laga walwalo luuqadaha.
Si toos ah ayey u tarjumaysaa farriimaha waqtiga dhabta ah, iyadoo la adeegsanayo nidaam farriimo oo luqado badan leh.
Labada shaqaale qorista iyo shaqaaleeyaha labadaba waxay ku bedelan karaan afkooda hooyo. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa si aad u qorsheysid waraysiyada shaqada oo aad u gudbiso macluumaadka lagama maarmaanka ah.
Waxaad isticmaali kartaa wax walba oo bilaash ah.
Shaqada caalamiga ah ee ugu horeysa ee caalamiga ah ee loo diro goobta wax ka qabta "Shaqada xudduudaha".
Waa maxay Hopper?